တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်း ပတ်ဂွန်ဟေး ထောင်နှစ် ၂၀ ချမှတ်ခံရ - Yangon Nation News
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်း ပတ်ဂွန်ဟေး ထောင်နှစ် ၂၀ ချမှတ်ခံရ
ဆိုးလ် ဇူလိုင် ၁၁
တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးချုပ်က တောင် ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်း ပတ်ဂွန်ဟေးအား အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် အာဏာ အလွဲ သုံးစားပြုမှုတို့ကြောင့် ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂၀ ကျခံစေရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင် ၁၀ ရက်တွင် တရားရုံးချုပ်က ပတ်ဂွန်ဟေးအား အဂတိလိုက်စားမှု ကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်၊ အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့် အခြားသော ပြစ်မှု များ ကျူးလွန်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ် စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ယင်းသို့ စွပ်စွဲချက်များ မြင့်တက်လာခဲ့သည့်အတွက် ပတ်ဂွန်ဟေး အား ဥပဒေပြုအမတ်များက သမ္မတရာထူးမှ ဖြုတ်ချခဲ့သည်။
ပတ်ဂွန်ဟေးသည် ဆမ်ဆောင်းနှင့် လော့တီ တို့အပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များမှ ဝမ် ၅၉ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀) ခန့် ရရှိရန် ၎င်း၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ချိုဆွန်ဆယ်နှင့် ပူးပေါင်းကြံစည် ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် ပတ်ဂွန်ဟေးသည် နိုင်ငံ၏ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ရန်ပုံငွေများ ကိုလည်း အလွဲသုံးစားပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ ရသည်။
ထို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သော မေလအတွင်းက ဥပဒေပြုအမတ်များက ပတ်ဂွန်ဟေးအား ထောင်ဒဏ် ၃၅ နှစ် ချမှတ်ရန် တောင်းဆို ခဲ့သည်။
Supporters of South Korean President Park Geun-hye stagearally opposing her impeachment near the Constitutional Court in Seoul on Friday. People gathered ahead of the court ruling on whether Park would be removed from office overacorruption scandal. The sign reads “South Korean President Park Geun-hye.” Recent polling showeda3-1 margin in favor of impeachment.
ပတ်ဂွန်ဟေးသည် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပျက်ကွက် ခဲ့သည့်အပြင် နိုင်ငံတော်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားများ ချမှတ်ခဲ့သည့် အတွက် ယင်းသို့ စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တရားရုံးချုပ်က ပြောကြား ခဲ့သည်။
ကိုးကား – အင်န်အိတ်ချ်ကေ
ဘာသာပြန် – အောင်ကျော်ကျော်
Source – ကြေးမုံ
အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့် လူထုကြားထဲသွားရင် Mask တပ်နေပြီ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင် ဂြိုလ်တုကို ဂျပန် နည်းပညာ အကူအညီဖြင့် ၂၀၂၁ တွင် လွှတ်တင်မည်